NOMERY 23.13-30 F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
NOMERY 23.13-30 F. 6
TSY MIOVA ARY MAHATOKY ANDRIAMANITRA
« Atao anie ny sitraponao ». Miandry teny avy amin’i Jehovah ihany Balaka mpanjaka fa raha mifanaraka amin’izay tadivainy ihany vao ekeny. Ny fiovana toerana dia heveriny hampiova koa ny teny avy amin’Andriamanitra. Efa manana zavatra ao an-tsainy izy ka tadiaviny hanaraka izany na dia Andriamanitra aza. Mikiribiby amin’ny tsy fanekena ny sitrapon’Andriamanitra izy ka mitady izay hevitra rehetra handosirana izany.
Marina mandrakizay ary tsy azo ivalozana izay rehetra lazain’Andriamanitra ka tsy misy olona, na fahefana, na toerana na fotoana afaka hanova izany. Mitady, manaiky ary mampihatra ny sitrapon’Andriamanitra rehetra eo amin’ny fiainana : izany no fiainan’ny tena mpanara-dia an’i Kristy marina.
Tsy takatry ny saina Andriamanitra. Fakam-panahy ho an’ny olona ny mametra an’Andriamanitra sy heriny ary ny hainy atao ho hatramin’izay takatry ny saina amam-pahalalan’ny maha-olona fotsiny ihany. “Tsy mba olombelona Andriamanitra”, ary ny olombelona, na inona na inona ataony, na oviana na oviana ary na aiza na aiza, dia tsy hitovy amin’Andriamanitra velively.
Miaina sy mandray ny zavatra sahara sy ilaina. Fitahiana no atokan’Andriamanitra ho an’ny olony (Deoteronomia 28.1-14) Momba sy mamonjy azy Izy. Tsy misy asan’ny fanahy ratsy (sikidy, ody ratsy, …) eo aminy ary tsy andairan’izany izy. Mahita fahombiazana sy fandresena izy amin’ny itondran’Andriamanitra azy. Toy izany no ataon’Andiamanitra amin’ny olona izay manaiky azy sy manaraka ny teniny.
Fampanantenana : «Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao rehetra, Fa aza miankina amin’ny fahalalanao; Maneke Azy amin’ny alehanao rehetra, Fa Izy handamina ny lalanao,» (Ohabolana 3.5-6)